I-Foursquare Yethula Ama-imeyili Wokubika Okungena | Martech Zone
I-Foursquare Yethula Ama-imeyili Wokubika Okungena
NgoLwesihlanu, Okthoba 26, 2012 Douglas Karr
Izibalo zethu zizacile, kepha ngijabule ukubona lo mbiko wendawo ophelele uvela eFoursquare emizuzwini embalwa edlule! Umbiko unikeza isifinyezo samasonto onke sokuthi ngubani ongene, ukuthi kufinyelelwa kuphi, ukuthi ngabe babelane ngokungena, namakhasimende aphezulu. Vele, kukhona nokubizelwa esenzweni ukwenza eminye imikhankaso esizeni, futhi… ngakho-ke i-Foursquare ifuna ukukhulisa imali engenayo. Kudos ku Foursqure Ithimba, noma kunjalo, ekukhiqizeni umbiko obaluleke kakhulu kumakhasimende abo futhi lokho kungakhulisa imali yabo.
Tags: ngena ngemvumeimeyiliezine
Imali engenayo ye-Social Media Drives